# IBC2015 တွင် RF ဖြန့်ဖြူးရာတွင်နည်းပညာအသစ်များကို ETL Systems မှပြသမည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » #IBC2015 မှာ RF ဖြန့်ဖြူးအတွက်နည်းပညာသစ်များတခုအဖြစ်မှ ETL စနစ်များ
#IBC2015 မှာ RF ဖြန့်ဖြူးအတွက်နည်းပညာသစ်များတခုအဖြစ်မှ ETL စနစ်များ
L-တီးဝိုင်း Matrix / router များအတွက်နယူးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု, Fiber နှင့် LNB power supply ကျော် RF မိတ်ဆက်ပြသခံရဖို့
ETL စနစ်များ, အဘို့အ RF ဖြန့်ဖြူးပစ္စည်းကိရိယာများတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒီဇိုင်နာနှင့်ထုတ်လုပ်သူ ဂြိုဟ်တု ဆက်သွယ်ရေး, အမ်စတာဒမ်၌ဤတစ်နှစ်ရဲ့ IBC မှာစက်တင်ဘာလ 10-15 အသစ်နှင့်တိုးတက်လာသော RF နည်းပညာတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဤအနည်းပညာများများထဲမှ ETL စနစ်များ '' သစ်ကို 64 × 64 ဟာရီကိန်း L-တီးဝိုင်း Matrix, Fiber ကိုကျော် Stingray RF, Piranha LNB ကို Power Supply ယူနစ်, နှင့် LS စီးရီးစောင့်ကြည့်ပြောင်းလဲမည်အဆင့်မြှင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အတိအကျ RX ကွင်းဆက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့စိတ်ကြိုက် matrix
အဆိုပါ 64 × 64 L-တီးဝိုင်းဟာရီကိန်း matrix ၏ထူးခြားသောဒီဇိုင်းကိုဖောက်သည်အတိအကျဘာတယ်လီပို့သို့မဟုတ်ထုတ်လွှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ကိုက်ညီသော input ကို module တွေရွေးဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကို input ကို port ကို Fiber L-တီးဝိုင်း input ကို, LNB Power, variable ကိုအမြတ် / ဆင်ခြေလျှောလျော်ကြေးများနှင့် RF အဆင့်ကိုထောက်လှမ်းအပါအဝင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် module တွေနှင့်အတူ လိုက်. နိုင်ပါသည်။ ဒီအပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လည်း matrix ကိုစွမ်းဆောင်ရည် optimized ခံရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အသုံးပြုသူစွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ရာမရရှိနိုင်ပါအသုံးမပြုတဲ့အမြတ်ရှိခြင်း, ဥပမာအားဖြင့်မြေတပြင်လုံးစနစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျောရန်မလိုအပ်ပါဘူး။
ETL ရဲ့စီးပွားဖြစ်နည်းပညာရိုးရာမက်တရစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ 25% ဖြင့်လျှော့ချခြင်း, matrix ၏တန်ခိုးစားသုံးမှု minimize လုပ်။
ဒါကြောင့်အပေါငျးတို့သ matrix ကိုအတွင်းပေါင်းစည်းနိုင်ပါတယ်အဖြစ်ဟာရီကိန်းရဲ့ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဒီဇိုင်းကိုဖိုင်ဘာလက်ခံ module တွေနှင့် / သို့မဟုတ် LNB Power များအတွက်အပိုဆောင်းကိုယ်ထည်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းရှင်းလင်းစေပါတယ်။
ဖောက်သည်တစ်ဦး 32 × 32 ဟာရီကိန်း matrix ကို၎င်းတို့၏ 64 × 64 Enigma matrix ကို upgrade နှင့်နေဆဲတန်ဖိုးရှိသောအားလပ်ချိန်မှာထိန်သိမ်းအာကာသရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာ4LNB ရဲ့ powering လျှင်ပင် 64U ပုံစံအချက်နှင့်အတူကျစ်လစ်သိပ်သည်း modular ဒီဇိုင်းကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါဟာရီကိန်း 850-2450MHz လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးနှင့်အတူ Ka-band နှင့် HTS applications များဖြည့်ဆည်းဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
အဆိုပါရပ်တည်ချက်မှဧည့်သည်များမှာလည်းဖိုင်ဘာနည်းပညာကျော် ETL ရဲ့ StingRay RF တွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်, အဖြစ်ကောင်းစွာသစ်ကို Piranha power supply ယူနစ်အဖြစ်။
performance & ခံနိုင်ရည်
StingRay ရဲ့မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဒီဇိုင်းကိုမြင့်မားတဲ့အထီးကျန်မှုတွေ application များအတွက်ကစံပြအောင်, အထီးကျန် module မှအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ module တစ်ခုပေးထားပါတယ်။ ကျချိန်ကို dual မလိုအပ်တဲ့ပူ-လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်ရေပူ-လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအားဖြင့်လျော့ချဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအကွာအဝေးယခု uplink နှင့် downlink transmission ကိုများအတွက်အပိုဆောင်းခံနိုင်ရည်များကို 1 + 1 နှင့်4+ 1 redundancy configuration options ကိုပါဝင်သည်။ ဖိုက်ဘာကျော်ရှည်တဲ့အကွာအဝေး transmission ကိုအဘို့, ETL အနိမ့်အရှုံးနှင့်အတူ 30km အကွာအဝေးမှ RF အချက်ပြမှုများကိုတက် transmit နိုင်သည့် CWDM module တွေမိတ်ဆက်ကြပါပြီ။
အဖြစ်ကောင်းစွာတစ် matrix ကိုမှတဆင့် powering LNB ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, ETL လည်းပါဝါ LNB ရဲ့ရန်ကို standalone ယူနစ်အသစ်တခုအကွာအဝေးကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Piranha ပါဝါထောက်ပံ့ရေးယူနစ်မြင့်မားတဲ့ကျစ်လစ်သိပ်သည်း 1U အတွက် DC က Power options များ, အစိတ်အပိုင်းများကိုနှင့်စက်ကိရိယာများအတွက်တစ်ဦးအကွာအဝေးများအတွက် 19 "ကိုယ်ထည်သည် ဂြိုဟ်တု မြေပြင်ဘူတာ RF နှင့်အာဏာဖြန့်ဖြူးချည်နှောင်။ အဆိုပါယူနစ်, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းချဲ့ခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ကြသည်။
Piranha ရဲ့ modular ချဉ်းကပ်ဖောက်သည်သူတို့လိုချင်တဲ့သောအရွယ်အစားကိုဝယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ LNB ပါဝါလိုအပ်ချက်တိုးလာအဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာတိုးချဲ့နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု power supply module ကိုရှေးခယျြစရာတွေနဲ့တိကျတဲ့ applications များ လိုက်. နိုင်ပါသည်။
ETL ရဲ့နည်းပညာသစ်လည်းပင်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်၎င်း၏အဆင့်မြှင့် LS စီးရီးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး switches များပေါ်တွင်အချိန်, တိုးတက်လာသောပြန်လာအရှုံးနှင့်အထီးကျန် switching နှင့်အတူလေယာဉ်တင်သင်္ဘောစောင့်ကြည့်ရေးအတှကျအတိုးတက်စွမ်းဆောင်ရည်များပါဝင်သည်။
ဒါ့အပြင် IBC မှာပြပွဲအပေါ် ETL ရဲ့ Alto လိုင်းချဲ့စက်များ, Dextra L-တီးဝိုင်း Splitters နှင့်ပေါင်းစပ်နှင့် 128 Vulcan Matrix ×ဟာကျစ်လစ်သိပ်သည်း 128 အပါအဝင် L-တီးဝိုင်း matrix ကို router ကိုမိသားစု, ဖွစျလိမျ့မညျသည်, 32 32 Enigma Matrix x, အ 16 32 ရဲရင့ x matrix နှင့် 16 × 16 ဗစ်တာ matrix ။
မှ Ian Hilditch, CEO နဲ့အင်ဒရူးစဘွန်းအရောင်းဒါရိုက်တာဆုရ RF ပစ္စည်းကိရိယာများဒီဇိုင်းအတွက် In-အိမ်သူအိမ်သားအတှေ့အကွုံရာစုနှစ်သစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်မီးမောင်းထိုးပြ ETL ရဲ့လေးပုံတပုံ၏အကွာအဝေးကိုသရုပ်ပြဖို့ event မှာ ETL ကိုယ်စားလှယ်များအကြားဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်း 67 အတွက် ETL ရဲ့ဖောက်သည်များ၏ 2015% ထပ်ဖောက်သည်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အမိန့်များ 93% များအတွက်စာရင်းကိုင်နှင့်အတူ၎င်း၏တီထွင်မှုများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုသည်။
တစ်သရုပ်ပြသို့မဟုတ် IBC 2015 မှာ ETL ကိုယ်စားလှယ်နှင့်အင်တာဗျူးတွင်စီစဉ်ဖို့သို့မဟုတ် ETL ရဲ့အသစ်စီမံကိန်းများအကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာတွေ့မှာလူးဝစ် Peak ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် [အီးမေးလျ protected].
PSSI သည် American Idol Finale ၏ရှုပ်ထွေးသောဂီယာအင်ဂျင်နီယာများကိုအောင်မြင်စွာရရှိခဲ့သည် - မေလ 20, 2020
Cloud-based လုပ်ငန်းအသွားအလာများအတွက်သိုလှောင်မှု - မေလ 20, 2020
Streaming Global: အနိမ့်ပိုင်းနှောင့်နှေးမှု၊ အဆင့်မြင့်သောအဆင့်နှင့် TCO အောက်ပိုင်းနှင့် Streaming Platforms များကိုတိုးမြှင့်ခြင်း - မေလ 15, 2020
64x64 ဟာရီကိန်း L-တီးဝိုင်း Matrix ETL စနစ်များ IBC2015 isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော LS စီးရီးစောင့်ကြည့်ပြောင်းလဲမည်အဆင့်မြှင့် Piranha LNB ကို Power Supply ယူနစ် ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးများအတွက် RF ဖြန့်ဖြူးကိရိယာများ RF နည်းပညာများ Fiber ကိုကျော် Stingray RF 2015-08-31
ယခင်: အဲရစ် Funk နှင့်အတူ PBS စီးရီး 11th & Grant က DPA မိုက်ခရိုဖုန်းပေါ်တွင်မူတည်
နောက်တစ်ခု: Cinegy @IBC2015!